Ekhaya > Iindaba zeshishini > Izixhobo zefanitshala zefanitshala zeOfisi kufuneka zisebenzise ntoni?
Izixhobo zeplastikiaqhelekileyo asetyenziswa ebomini, enye ifanitshala iya kusetyenziswa, kodwa ikwadlala indima ebaluleke kakhulu, ifenitshala yeofisi ikakhulu ibhekisa kwifenitshala efanelekileyo yeofisi, kufakelo nakwimveliso kusafuneka inkxaso yezincedisi, emva koko izinto zefanitshala zefanitshala zeofisi kufuneka zisetyenziswe Intoni?
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwizixhobo zefanitshala zefanitshala kukunxibelelana. Le mveliso isetyenziselwa ikakhulu unxibelelwano lwesiseko sefanitshala. Ewe umgangatho weemveliso uphezulu kakhulu, onolwalamano olukhulu nokusetyenziswa kamva.
Ngapha koko, kukho izincedisi eziphambili kwifenitshala sisitshixo nesiphatho, ilitshi nesiphatho akufuneki ukuba ndiyazise, ​​oku kuyimfuneko ngefanitshala, ilock ngoku ikwindawo yentengiso ngesitshixo se-elektroniki kunye nesitshixo sesitshixo, zininzi iintlobo zokubamba, unokukhetha ngokweemfuno zazo.
Izinto zefanitshala zefenitshala yeOfisi kukho isilayidi, kwidrowa yimfuno yokutyibilika, kwaye kwisilayidi senziwe ngeplastiki, kumgangatho okoko nje singayisebenzisi ngokungazenzisiyo loo mgangatho awuyi kuba nengxaki enkulu kangaka.
Kwifenitshala yeofisi igxunyekwe kwimfuno yokuma kunye ne-castor, ezi mveliso zinokuba nefuthe lokuzinza, ezibekwe kwigumbi nazo azizukuvela zonakalise, kuba imveliso yeofisi inkqubo yemveliso nayo imfutshane hayi kancinci, kodwa xa khetha uphawu olulungileyo kumgangatho wokugcina iinyawo ulunge kakhulu, kwaye uhlobo lwehashe lubhalwe igama kunye nenoveli, umbala kakhulu kwinkampani.
Ukuhlelwa kwezinto zefanitshala zefanitshala zeofisi:
Ngokoluhlu lwezinto:ingxubevange zinc, aluminium ingxubevange, intsimbi, iplastiki, intsimbi engatyiwa, PVC, ABS, ubhedu, nenayiloni, njl
Ngokomsebenzi wokuhlelwa:ulwakhiwo lwezixhobo zefanitshala: ezinje ngesakhelo setafile yeglasi yesinyithi, umlenze wentsimbi wetafile ejikelezileyo njalo njalo
Isixhobo sefanitshala esisebenzayo:ukuba ukhwele ihashe ukuzoba, ihenjisi, isi-3 kwinto yokudibanisa, isilayidi somkhondo, ibhodi yomaleko ibambe umzuzwana
Izixhobo zefanitshala ezihombisayo:ezinje ngomda wealuminium, isiphatho sesinyithi, isiphatho sesinyithi njalo njalo
Izinto zefanitshala zefenitshala yeOfisi ikakhulu zibandakanya isikisi, isikrufu sokhuni, ihenjisi, isiphatho, isilayidi, uvalo, izincedisi zekhreyithi, isikhonkwane, umatshini wokuhambisa, umatshini wokuqengqeleka, umatshini wokuhambisa, iinyawo zentsimbi, isakhelo sesinyithi, isiphatho sesinyithi, ivili, ivili, uziphu, intonga yomoya, imithombo, oomatshini, ifanitshala yehenjisi, idrowa, isikhokelo sikaloliwe, isinyithi, ukutsala ibhaskiti, ukuxhoma ibar, isinki, ibhasikiti, ukudubula ukukhanya, ibhodi ye-skirting, imela kunye nesitya sefolokhwe, i-condole hang, ikholamu yemisebenzi emininzi, umzimba wekhabhinethi indibaniselwano.
Kule mihla, ifanitshala yezixhobo zefanitshala iya isiba nomtsalane ngakumbi kumthengi, inkampani nganye yefenitshala kufuneka iqonde imeko yentengiso, isebenzise imeko kunye nezinto zentengiso zehardware ezishushu, ulwalathiso olutsha lwamashishini.
Edlulileyo:Wazi ntoni malunga neempawu zezixhobo zefanitshala zehardware?
Okulandelayo:Ifenitshala yeplastiki iye yaba yinto entsha kwishishini lefenitshala